आजको राशिफल २०७६ भाद्र १८ गते बुधबार |
आजको राशिफल २०७६ भाद्र १८ गते बुधबार
वि.सं. २०७६ भाद्र १८ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१९ सेप्टेम्बर ०४ तारिख, परिधावी नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, आजको चाडपर्व र उत्सव : सूर्यषष्ठी, भाद्रपद शुक्लपक्ष (ञलाथ्व) षष्ठी तिथि, मध्यरात्रीपछि ०३:२४ बजेसम्म, त्यसपछि सप्तमी तिथि, स्वाती नक्षत्र, दिउँसो ११:१२ बजेसम्म, त्यसपछि विशाखा नक्षत्र, चन्द्रमा तुला राशिमा, मध्यरात्रीपछि ०४:३५ बजेसम्म, त्यसपछि बृश्चिक राशिमा, ब्रह्म योग, बिहान ०५:४६ बजेसम्म, त्यसपछि ऐन्द्र योग, सुरुमा कौलव करण दिउँसो ०४:१२ बजेसम्म, त्यसपछि तैतिल करण मध्यरात्रीपछि ०३:२४ बजेसम्म, अन्तिममा गर करण, आनन्दादि योग : धूम्र, चन्द्रवर्ण : सेतो, चन्द्रदिशा : पश्चिम, योगिनीदिशा : पश्चिम, वारशूल : उत्तर, काठमाण्डौ, नेपालमा, सूर्योदय : बिहान ०५:४३ बजे , सूर्यास्त : साँझ ०६:२१ बजे, दिनमान : ३१ घडी ३५ पला (१२ घण्टा ३८ मिनेट, रात्रीमान : २८ घडी २५ पला (११ घण्टा २२ मिनेट),
विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ । आयआर्जन पनि राम्रै हुनेछ । सुखदुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् । कामको चाप र थकाइबाट मुक्त रही विश्राम पाइनेछ । परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ । मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । आज मनभित्रको मान्छेसँग भलाकुसारी हुने दिन हो । त्यस्तै कतै मेजमानी पाइने वा अतिथिका रूपमा सम्मान पाइने समय छ । रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रयत्न गर्दा व्यावसायिक काम सम्पादन हुनेछन् । घरायसी प्रयोजनका सुखसुविधाका सामाग्रीको किनमेल गरिने छ । नयाँ ज्ञान सिक्ने अनुकूलता मिल्नेछ । परिवारका सदस्यहरूसँग आत्मीयभावमा बृद्धि हुनेछ । प्रेमसम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ ।
हाँकेका र ताकेका काममा चुनौती र प्रतिस्पर्धा गर्नु परे पनि सफलता नै मिल्ने समय छ । शत्रु र प्रतिद्वन्द्वीको योजना र चलखेल थाहा पाउनाले काम गर्न सजिलो हुनेछ । व्यापार तथा उद्योगतर्फ फाइदाको योग छ । आम्दानी बढ्ने र फाइदा उठाउने समय छ । वैदेशिक यात्राको प्रकिया अघि बढ्न सक्छ । पुरानो लेनदेन र बाँकीबक्यौताको समस्यालाई हल गरिने छ । कामको चाप बढ्ने छ, तर बेफाइदा हुँदैन । शत्रुपक्ष सक्रिय हुने दिन हो, त्यसैले फाइदाका लागि योजनाहरू गोप्य राख्न आवश्यक देखिन्छ । आफ्नो क्षेत्र र विषयवस्तुमा अरूले अधिकार जमाउन चेष्टा गरे पनि सफल हुने छैनन् । सरकारी र राज्यपक्षको काममा सफलता मिल्नेछ ।
एकाबिहानै सन्ततिको पठनपाठन र व्यक्तित्वविकासको चिन्ताले सताउन सक्छ, तर पनि बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा समय प्रदान गरिने छ । दैनिक कामकाज र बन्दव्यापारमा राम्रै छ । मानप्रतिष्ठा प्राप्तिका प्रयास हुनेछन् । गुरुजन, अभिभावक र साथीभाइले दिएको सल्लाहालाई मान्नु आजका लागि उपयोगी हुनेछ । शैक्षिक, प्राज्ञिक र बौद्धिक क्षेत्रका लागि समय निकाल्न सकेमा प्रगति हुनसक्छ, तर व्यवहारिक समस्या र कार्यक्षेत्रको चापले काममा अवरोधको सम्भावना छ । शुभचिन्तकले दिएको सल्लाहाबमोजिम मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादाका लागि गरेको प्रयास सफल हुनेछ । भावुक र संवेदनशील समय छ, एकान्तमा बस्नुभन्दा कर्मक्षेत्रमा सक्रिय रहनु राम्रो हुन्छ ।
चौथो भावमा रहेको चन्द्रमाले शुभफल प्रदान गर्न कन्जुस्याइँ गर्दछ, त्यसैले हतारको निर्णय र काममा गरेको हडबडेपनले झन् काम बिग्रने डर हुन्छ, संयम र सजग हुनु राम्रो हुन्छ । रोकिएका घरेलु कामकाज सिद्ध्याउन निकै खट्नु पर्ने समय छ । आजको योजना र लक्ष्यको समुचित प्रतिफल आउने छैन । मान्यजनको सुझाव अप्रिय लाग्नेछ । परिवारजनमा पनि असमझदारी बढ्नेछ । पशुधन र जग्गाजमिनबाट पनि भनेजस्तो लाभ हुनसक्दैन । परिवारजन तथा बन्धुबान्धवबीचको दूरी बढ्नेछ । बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतका कमजोरीका कारण अपमानित हुनुपर्छ । नयाँ काममा हात हाल्नु राम्रो हुँदैन । तर वैदेशिक कामधाम र स्थायी सम्पत्ति बेचबिखनको प्रयास सफल हुनेछ ।
सामाजिक र परोपकारी कामतर्फ आकर्षण रहने दिन हो, त्यस्तै रोजगारी र व्यापार/व्यवसायमा आज विशेष महत्वको दिन हुनेछ । पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदाको योग छ । प्रतिस्पर्धी परास्त हुनेछन् । आम्दानी बढ्नेछ । कृषिक्षेत्र वा घरपरिवारमा देखिएका चुनौतीको निवारण गरिने छ । दाजुभाइ र बन्धुबान्धवका काममा सहभागी बन्नुपर्ने देखिन्छ, त्यस्तै सामाजिक कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्नु पर्नेछ, जसबाट सम्मान प्राप्त हुनेछ । सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ । बोलीको प्रभाव रहनाले काम बन्नेछ, तर्क र विवादमा विजय प्राप्त हुनेछ । कुटुम्बका तर्फबाट खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ ।
दोस्रो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, मानसम्मान बढ्नेछ भने बोलीको भरमा काम सम्पादन हुने योग छ । विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ । प्रशंसकहरू बढ्नेछन् । सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन् । राम्रै फाइदाको योग छ । विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ । विशेष सभासमारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ । लगनशीलता देखाएमा राम्रो उपलब्धी हासिल हुनेछ । काम र पठन–पाठनमा रुचि जाग्नेछ । सामुदायिक भावनाको विकास हुने छ । करकुटुम्ब तथा नातागोताको काममा सहयोग लिन/दिन सकिने समय छ । गीत, सङ्गीत र कलाका साधकहरूका लागि आज विशेष महत्त्वको दिन बन्नेछ ।
आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहेकाले विगतका कमीकमजोरीको ढाकछोप गरी अघि बढ्ने अवसर प्राप्त हुनेछ, हाँकेको ताकेको काममा सफल भइने छ । रचनात्मक काम सुरु गर्ने समय छ । रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द पाइएला । विगतको सफलताले थप काम गर्न हौसला मिल्नेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ । अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् । लाभमूलक कामको आश्वासन पाइनेछ । पारिवारिक भेटघाटको समय छ । विशेष व्यक्तित्वलाई भेट्ने मौका आउला । विछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ । स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ । मन धनागमका मार्गको खोजीमा हुनेछ र लक्ष्यप्रति सजग भए कार्यमा सफलता मिल्ने समय छ ।
सोचेको काम बनाउन समय र धन दुबै पक्षमा अनावश्यक खर्च बढ्न सक्छ । व्यवसायमा थप लगानी बढाउन उपयुक्त समय छैन । लामो दूरीको यात्रा र वैदेशिक कामकाजमा पनि भनेजस्तो फाइदा लिन सकिंदैन, धेरै टाढा जानु हुँदैन, झमेला आउन सक्छ । मन आलस्य, डर र चिन्ताले जरो गाड्ने छ । दिगो फाइदा हुने काममा लगानी बढाउन सकिने छ । पतिपत्नीबीचको आपसी सम्बन्धमा उतारचढाव ब्यहोर्ने समय हो । आर्थिक पक्ष पनि पेचिलो रहेको छ, सन्तुलन नहुनाले आर्थिकबोझ थपिने समय हो, उता कार्यक्षेत्र र बन्दव्यापारमा पनि मन्दी छाउने छ । समय र नियमको अनुशासनलाई बेवास्ता गर्दा अवसर र लाभ गुम्न सक्छन् । दण्ड वा जरिवानामा परिने सम्भावना छ ।
अष्टमेश राज्यस्थानमा रहेकाले आज अनुशासन र नियमको पालना गर्ने दिन हो, नत्र झमेलामा फँस्न सकिन्छ । आर्थिक र व्यवसायिक पक्ष सबल देखिन्छ । बन्दव्यापारमा पनि बढी नै फाइदा हुनेछ । विभिन्न भौतिक साधनहरू जुट्नेछन् । परिवारजनका आवश्यकता पूरा हुनेछन् । दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन सकिनेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । पढाइमा प्रगति हुनेछ । उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । पितृधनको उपयोगबाट विशेष फाइदा उठाउन सकिने छ । गरेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ । आर्जन गरिएको रकम सदुपयोग गरिने छ वा सञ्चय हुनेछ ।
प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । सामाजिक कामको दायित्व बढ्नेछ । काममा मान्यजनको सहयोग प्राप्त हुनेछ । भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ । व्यापारमा राम्रो फाइदा छ, अहिलेको लगानीले दीर्घकालमा फाइदा पुग्नेछ । ज्ञान र बुद्धिको क्षेत्रका सफल भइने छ । हाकिम, गुरुवर्ग वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ । दूरगामी भविष्यप्रति लक्षित लगानी गरेमा पछि राम्रो फाइदा आर्जन गर्न सकिने छ । श्रमको समुचित मूल्याङ्कन हुनेछ । घरायसी सम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ । नयाँ रोजगारी वा व्यवसायका लागि आजको चिन्तनले काम गर्ने समय छ ।
भाग्यमा चन्द्रमा रहेकाले जुनसुकै समस्या परे पनि मान्यजन वा अभिभावकको राय ग्रहण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । पेसागत वा व्यवसायिक उन्नतिका लागि चालेका कदम सफल हुनेछन् । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय छ । परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा अझ राम्रो हुनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । पढाइमा पनि राम्रै प्रगति हुनेछ । आर्थिक पक्ष सबल छ । साथीभाइसित भेटघाट हुने र आकस्मिक लाभ मिल्ने दिन छ । भाग्य चम्किने समय छ । सामूहिक नेतृत्व सम्हाल्ने मौका मिल्नेछ । बन्दव्यापारमा लाभ मिल्नेछ । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुनेछ । घरपरिवारमा खुसीको वातावरण सिर्जना हुनेछ ।
परिवारजनको आत्मीयतामा कमी आउने छ । आठौं भावमा रहेको चन्द्रमाका कारण लेनदेनको विवादले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । ख्याल गर्नुपर्छ, आज सहयोगीहरूको भरपर्दा सबै काम नबन्न सक्छन्, त्यसैले कुनै नयाँ काम छ भने हात हाल्न केही समय पर्खंदा राम्रो हुनेछ, गर्नैपर्ने काममा आफ्नै मस्तिष्क र पाखुरी खियाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । कसैको भर नपर्नु होला, आश्वासन दिएर झुक्याउनेहरूले सताउनेछन्, सचेत रहनुहोला । स्वास्थ्यमा कमजोरी र उपचारमा खर्च हुने योग छ । अध्ययनमा समय दिन नसकिएला । मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुनेछ । पहिलेका समस्या दोहोरिन सक्छन् । फाइदाका लागि योजना गोप्य राख्नुहोला । सवारीसाधन हाँक्दा सचेत हुनुपर्छ ।